प्राय: पारंपरिक फ्रान्सीसी डिश | सडकको लागि एक युगल
मई 5, 2019 / एक टिप्पणी छोड
फ्रांसीसी व्यञ्जन निषेध रूपमा ग्रहमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो सुरुचिपूर्ण, रंगीन र स्वादिष्ट भोजनले कसैलाई चकित पार्न सक्छ, र यही कारणले फ्रान्सको सबैभन्दा राम्रो व्यञ्जनमा हराइरहेको बेला बेलायतको पुरानो शहरमा एफिल टावर वा प्यारा सडकहरू घुमाउन पाप हुनेछ!
आखिर, फ्रांसीसी ज्योतिष विज्ञान एक कारण को लागि यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची को एक भाग बन्यो - प्रसिद्ध शेफ जस्तै पॉल बोकोस र महान ला मेर बियरियर। तपाईंलाई फ्रान्समा भएको सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनमा हेरौं!
रोमन समय, फ्रान्स प्याजियन सूप वा सूप à l'oignon संयुक्त राज्य अमेरिका र फ्रांसीसी भोजनमा यसको रुचिको लागी धन्यवाद 1960 मा फिर्ता आफ्नो लोकप्रियता पुन: प्राप्त भयो।
यो हार्दिक र प्यारा सूप मासु बीउ को टुक्रा हुन्छ र धीरे - धीरे caramelized प्याज पकायो र प्राय: क्राउटोन र पनीर को साथ मा, स्टार्टर को रूप मा सेवा दिईयो।
विशेष गरी चिसो जाडो दिनहरूमा राम्रो!
Coq au Vin एक फ्रांसीसी क्लासिक हो जुन कुनै पनि देशमा उत्कृष्ट खाना बनाउने जस्ता कामदार वर्गले के गरेको थियो जुन उनीहरूको थियो। यो पोल्ट बेस डिस्काउन्ट लामो र कम लाल रक्सी र तरकारीमा पकाएको छ, र साँच्चै, साँच्चै स्वादिष्ट छ।
उत्सुक यो सही तरिका कसरी बनाउने? हामी कसरी हाम्रो सरल र सह संग Coq एक वि Vin बनाउँछ हेर्नुहोस् स्वादिष्ट नुस्खा!
एक निरपेक्ष फ्रान्सीसी क्लासिक्स, क्रोक Monsieur अर्थ "मिस्टर क्रंच" मात्र एक हैम र पनीर स्यान्डविचमा पहिलो पटक 1910 लाई पेरिसमा फर्काउन पहिलो उपस्थिति रेकर्ड गर्दै।
परम्परागत रूपले उबलिएको हैमबाट बनाइएको छ जुन रोटीको स्लाइसको बीचमा बस्छ र ग्रेटेड पनीरको साथ फ्याँकिन्छ। यो नमकीन र मरिच गरिसकेपछि, ओवनमा पकाइएको वा फ्राइङ प्यानमा सुकेको हुन्छ।
स्यान्डविचका थुप्रै संस्करणहरू अवस्थित छन्, अर्को लोकप्रिय संस्करण हो Croque Madame माथिको पोलिएको वा तलामा अण्डा संग आउँदैछ।
फ्रांसीसी व्यञ्जन को एक लामो समय सम्म सदस्य, Quiche अन्य देशों मा पनि लोकप्रिय छ।
यसमा एक स्वेरी स्वाद छ र खुला फ्लान अण्डा, क्रीम वा दूध भरिएको छ र मासु, पनीर, सब्जियां वा समुद्री खाना पनि हुन सक्छ। अन्य प्रकारका क्विच मशरूम वा पालक जस्तै सामग्रीसँग फेला पार्न सकिन्छ।
ठण्ड र तातो सेवा गरिसकेको छ, यसले दुवै तरिकाहरू काम गर्दछ र ठूलो पार्टीको भोजनको रूपमा लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ।
एट्रिब्युशन: लिभभर [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
निकोस सलाद एक प्रेन्सेन्स क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने सबैभन्दा प्रसिद्ध र विशिष्ट फ्रांसीसी सलाद मध्ये एक हो। यो पनि सम्भवतः सबै भन्दा बहस व्यंजनहरू मध्ये एक छ, धेरै मशहूर शेफहरूले नयाँ विविधताहरू सिर्जना गर्छन् र पारंपरिकवाद र अभिनयहरू बीचको छलफलका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छन्।
परम्परागत सलाद संस्करणले ज्वरो तेलको ड्रेसिंगको साथ कडा-अँध्यारो अण्डा, टमाटर, एन्चोइज, निकोज जैतूनमा समावेश गर्दछ। ताजा वा डिब्बाबंद ट्यूना पनि थप्न सकिन्छ।
निकोस सलादले 20 पछि यसको प्रसिद्धि र लोकप्रियताको आनन्द लिइरहेको छth यो दिन धेरै दिन। तापनि Gordon Ramsey यो सबै भन्दा राम्रो गर्मी को सलाद को रूप मा उल्लेख।
फ्रान्समा प्रोटेन्स क्षेत्रबाट अर्को उत्कृष्ट डिश। कहिलेकाहीं रत्तौलेल नेकोज भनिन्छ, यो एक स्टुड वाला सब्जिङ डिश हो जसले पनि एक साइड डिशको रूपमा सेवा गर्न सक्छ, मुख्य वा ओमेलेट जस्तै खानाहरूको भरपूर हुन सक्छ।
मुख्य अवयवहरूमा प्याज, टमाटर, जुचिन, ए्युबर्जिन, बेल मरिच, गाजर, मगोरम, लसुन, फनेल, र तुलसीको साथ सब्जेल जस्ता सबभन्दा ठूलो सरणी समावेश गर्दछ।
सब्जहरू सामान्य रूपमा प्यानलमा अलग तापक्रममा पकाएका हुन्छन् र त्यसपछि एक डिशमा ओवनमा पकाइएको हुन्छ र तपाईंको प्लेटमा स्वादिष्ट इन्द्रधनुष हुन सक्छ!
अब चल्ने फ्रान्सेली व्यञ्जन को अधिक विदेशी पक्षमा र चल्ने एस्कोगोट भेट्न को लागी बस सार्न को लागी।
तयारीमा मारिएको, चोर्नु र यसको खोलबाट घाम हटाउने र त्यसपछि लसुन मक्खन, चिकन स्टक वा रातो रक्सी संग खाना पकाउनु पर्छ। स्नर्स पकाउन समाप्त भएपछि, तिनीहरू अनुहार र मक्खन जस्तै अजवाय, लसुन, थिम वा पाइन नट जस्ता अतिरिक्त घटकहरूको संभावना संग आफ्नो गोलाहरूमा राखिन्छन्।
स्पेन वा ग्रीस, र अफ्रिका जस्ता महाद्वीपहरू जस्तै लोकप्रिय अन्य देशहरूमा लोकप्रिय, यसको इतिहास इतिहासको प्रागानिक समयमा पत्ता लगाउन सकिन्छ जब रोमीहरूले एक कुलीन खानाको रूपमा एस्कोगोट गरे।
यदि तपाईं केहि रोचक र असामान्य खोज्दै हुनुहुन्छ भने, फ्रान्समा केहि स्वादिष्ट घोंसलाहरू प्रयास गर्दै तपाईंको उत्तम शर्त हो!
एक मीठो नोटमा फ्रान्सेली व्यञ्जनको माध्यमबाट हाम्रो खाना यात्रा पूरा गरौं!
एक पल्ट एक पल्ट, 160km पेरिस को दक्षिण, स्टेफनी टिटेन, एक होटल मा भागिएको दुई बहनों मध्ये एक, ओभरक्ट गरिएको थियो। थकित र एक पारंपरिक सेब पाइ पाइको कारणले जलाएको पाईको गन्ध र पाई लामो मक्खनको लागि मक्खन र चिनोमा पकाउनु पकाउनु भएको छ।
डिश उद्धार गर्न प्रयास गरेर उनले पेस्ट्री बेसलाई माथि राखे र फेरि पकायो। सानो त्यो थाहा थियो कि गरेर गरेर यसलाई बदलिन्छ, कि स्याउ जलेको पनी यो हस्ताक्षर होटल डिश हुनेछ। अनि त कसरी टार्ट टेटिन जन्मिएको थियो, कम से कम लोकप्रिय किंवदंतियों मध्ये एक को अनुसार!
स्वादिष्ट टार्ट टेटिन यसको एक मात्र र मुख्य घटक एप्पल संग एक पेस्ट्री डिश हो, तर केहि किस्महरु लाई पीडा या अनानास जस्तै फलों संग मौजूद छ।
श्रेणी: पाक, युरोप, खाद्य र पेय, फ्रान्स, फ्रान्सेली टैग: croque monsieur, फ्रान्सेली खाना, फ्रेन्च प्याज सूप
← सर्वश्रेष्ठ डिशहरू जर्मनीमा छ
चिकन टिक्का मसाला नुस्खा →